DAAWO: Xildhibaan Cabdirashiid Xidig oo fariin adag u diray Axmed Madoobe.
September 16, 2019 NEWS 1
KISMAAYO(P-TIMES) – Xildhibaan Cabdirashiid Maxamed Xidig oo sheegay in 22kii bisha August loo doortay Madaxweynaha Jubbaland ayaa maanta si rasmi ah uga jawaabay hanjabaad dhawaan ka timi Axmed Madoobe oo isna dib loo doortay isla 22kii August ee sannadkan.
Shacabka ayuu sheegay in ay taageersan yihiin dhankooda oo ay mar kasta ku jiraan marxalad cabsi, ka dib hanjabaado uu sheegay in ay ka imaanayaan dhinaca kasoo horjeeda ee hadda talada gacanta ku haya.
Jubbaland ayaa kujirta daganaansho la`aan siyaasaded, dad badan ayaana walaac ka muujinaya habka ay hadda wax ku socdaan, iyadoo uu dhawaan Madaxweynaha xilka haya sheegay in aysan u dulqaadan doonin ficilada, Madaxweynayaasha, Dawladdo iyo shaqsiyaad uu sheegay in ay xilal sheeganayaan oo ula jeeday mucaaradka ka soo horjeeda.
Lol bootoole xisig iska hadlenacas liita